ကုန်ပစ္စည်းဖြန့်ဖြူးသူနှင့်စက်ရုံမှ စိတ်ကြိုက်စောင့်ကြည့်ရေးနာရီ Dial Printing မှအရည်အသွေးမြင့် စိတ်ကြိုက်စောင့်ကြည့်ရေးနာရီ Dial Printing ကိုဘယ်လိုရှာရမလဲ။
ပုံစံ - Surface customization
Surface Carving သည်အထိမ်းအမှတ်သို့မဟုတ်အဓိပ္ပါယ်ရှိသောပုံစံများနှင့်စာကြောင်းများကိုမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပြသနိုင်သည်.
အဆိုပါအကျိုးသက်ရောက်မှုလေယာဉ်ပေါ်တွင်အနည်းငယ်ခွက်သဲလွန်စဖြစ်ပါတယ်,နှင့်အရောင် beige fixed ဖြစ်ပါတယ်(panel ကိုပစ္စည်း၏အရောင်)နှင့်အရောင်ကိုမရွေးနိုင်ပါ.
▲【လက်ရာမြောက်သောနေရောင်ခြည်】မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိနေ့စွဲ ၀ င်းဒိုးနှင့်လိုဂိုများ၏အနေအထားကိုရှောင်ပါ,သည်အခြားကွက်လပ်ထုတ်လုပ်မှု၏နယ်ပယ်အတွင်းမရှိကြပေ.
အမှာစာကိုအတည်ပြုပြီးနောက်ထုတ်လုပ်မှုအချိန်မျက်နှာပြင်အမှတ်အသား 10 ဖြစ်ပါတယ်-၁၅ ရက်
Jinzhi Surface မှာယူမည့်အချိန်မှာအမိန့်ကိုအတည်ပြုပြီးရက်ပေါင်း ၃၀ ဖြစ်သည်
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.designwatches.com.tw/my/custom-watch-dial-printing.html
ကြေးစားထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်းနှင့်ပြည်ပပို့ကုန်အဖြစ်, Xing Heart Enterprise Partnership ၏ဒီဇိုင်း, ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ကုန်သွယ်မှုအတွက်အထူးပြုကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်သည် စိတ်ကြိုက်စောင့်ကြည့်ရေးနာရီ Dial Printingသင်ပြဿနာများရှိသည်ဒါမှမဟုတ်တခြားကုမ္ပဏီတွေရဲ့ထုတ်ကုန်များနိမ့်ကျအရည်အသွေးကစိတ်ပျက်နေကြသည် .If ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ကြိုးစားဖတ်ရှုပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်စုံလင်စွာသင်နှင့်သင့်ဖောက်သည်ဝစွာကျွေးမည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်တရုတ်ဖောက်သည်ကုန်ပစ္စည်းများကိုထောက်ပံ့။
အကောင်းဆုံး စိတ်ကြိုက်စောင့်ကြည့်ရေးနာရီ Dial Printing ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက် စိတ်ကြိုက်စောင့်ကြည့်ရေးနာရီ Dial Printing ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူနှင့်ဖြန့်ဖြူးသူ စိတ်ကြိုက်စောင့်ကြည့်ရေးနာရီ Dial Printing ကိုရှာဖွေရန်နှင့်ဝယ်ယူရန်အတွက်၊ Taiwan